Vidim-Purchase Term & FAQ - Pandawill Technology Co., Ltd.
Ahoana ny fomba hanafahan'ny Pandawill singa amin'ny baiko Turn-Key?
Izahay dia manafatra ny faktioranao ara-nofo marina, 5% na 5 fanampiny ho an'ny ankamaroan'ny singa. Indraindray isika dia miatrika baiko kely / marobe izay tsy maintsy vidiana singa fanampiny. Ireo faritra ireo dia voaresaka ary nekena avy amin'ny mpanjifanay alohan'ny hanafarana.
Amin'ny asa lehibe, inona no ataon'ny Pandawill momba ny fiampitana ampahany na fanoloana?
Pandawill dia afaka manampy amin'ny fitazomana ny lisitra, fa izahay kosa tsy hanolo ny ampahany amin'ny faktiaranao amin'ny ampahany efa anananay. Azontsika atao ny manome soso-kevitra ny lakroa na manampy amin'ny fisafidianana singa raha ilaina izany, fa handefa taratasy angon-drakitra izahay mba hitakiana ny fankatoavan'ny mpanjifa alohan'ny hanafarana.
Inona ny fotoana mitarika amin'ny kaomandy fihodinana?
1.Procurement lead time dia ankoatry ny fotoana mitarika fivoriambe.
2.Raha manafatra takelaka fizaran-tany izahay, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia io no ampahany mitarika fotoana lava indrindra ary voafaritry ny filan'ny mpanjifa.
3.Ny singa rehetra dia tokony horaisina alohan'ny hanombohana ny ampahany amin'ny fivorian'ny kaomandy.
Azonao atao ve ny manafatra singa fotsiny sa tsia?
Eny, afaka manafatra izay ilainao omena anay fotsiny izahay, ary azonao omena ny ambiny. Izahay dia miantso an'io karazana baiko io ho toy ny asa fanalahidin'ny ampahany.
Inona no mitranga amin'ireo sisa tavela amin'ny baiko Turn-Key?
Ireo singa manana fividianana farafaharatsiny fividianana dia averina miaraka amin'ny PCB efa vita na Pandawill dia manampy amin'ny fitazomana ny lisitra araky ny fangatahana. Ny singa hafa rehetra dia tsy averina amin'ny mpanjifa.
Inona no ilaiko halefa amin'ny kaomandy fihodinana?
1.Bill ny fitaovana, feno info amin'ny endrika excel.
2.Ny fampahalalana feno dia misy - ny anaran'ny mpanamboatra, isan'ny ampahany, mpamolavola ref, famaritana singa, habetsahana
3. Fenoy ireo rakitra Gerber
Angona 4.Centroid - io rakitra io dia azo noforonina Pandawill raha ilaina izany.
Ahoana ny amin'ireo singa mora tohina amin'ny hamandoana?
1.Betsaka fonosana SMT maro no mandray hamandoana kely rehefa mandeha ny fotoana. Rehefa mandalo ao anaty lafaoro refow ireo singa ireo dia mety hitatra sy hanimba na hanimba ilay puce ny hamandoana. Indraindray dia hita maso ny fahasimbana. Indraindray tsy hitanao mihintsy. Raha mila manamboatra ny singa misy anao izahay dia mety hihemotra hatramin'ny 48 ora ny asanao. Ity fotoana fandrahoana ity dia tsy hanisa ny fotoanananao.
2. Manaraka ny fenitra JDEC J-STD-033B.1 izahay.
3.Ny dikan'izany dia hoe raha toa ka voamarika ho malemy ny hamandoana na misokatra sy tsy misy marika ny singa dia hojerentsika raha ilaina ny manendasa na miantso anao hamantatra raha ilaina ny manamboatra azy.
4. Amin'ny fihodinana 5 sy 10 andro, mety tsy hiteraka fahatarana izany.
5. Amin'ny asa 24 sy 48 ora, ny filana hanendasana singa dia hiteraka fahatarana hatramin'ny 48 ora izay tsy isaina amin'ny fotoanan'ny tononkirao.
6.Raha azo atao, andefaso hatrany aminay ireo singa natombokay tao anaty fonosana nandraisanao azy ireo.
Ahoana no fomba hamatsy kojakoja?
Ny kitapo, ny lovia, sns sns dia tokony homarihina mazava tsara miaraka amin'ny isa ampaham-bato izay voatanisa ao amin'ny faktioranao.
1. Miankina amin'ny serivisy fivoriambe izay nofidinao, afaka miasa miaraka amin'ny kasety notetezena izahay, ny fantsona, ny rojo ary ny lovia. Heverinay fa hisy ny fitandremana mba hiarovana ny fahamendrehan'ireo singa.
2.Raha singa mando na marefo ny statika, dia ampidiro fonosana mifanaraka amin'ny fonosana voafehy sy / na voaisy tombo-kase.
Ny singa 3.SMT omena malalaka na betsaka dia tokony ho raisina ho toy ny fametrahana loaka. Tokony hanamafy miaraka aminay foana ianao alohan'ny hitadiavana asa misy singa SMT malalaka. Ny fandefasana azy ireo malalaka dia mety hiteraka fahasimbana ary mety handany vola bebe kokoa amin'ny fikirakirana. Saika tsy dia lafo loatra ny mividy andian-dahatsoratra vaovao avy eo mba hanandrana antsika hampiasa azy ireo malalaka.